?Aqoonsiga Khaatumo ma?ahan qorshe aan ku burburinayno maamullada Puntland iyo Somaliland” Madaxwayne Shariif. – Radio Daljir
?Aqoonsiga Khaatumo ma?ahan qorshe aan ku burburinayno maamullada Puntland iyo Somaliland” Madaxwayne Shariif.
Moqdisho, March, 08 ? Madaxwaynaha dawlada federaalka ah ee Soomaaliya Shariif Sh. Axmed ayaa maantay sheegay inuu dhawaan magacaabayo guddi gaar ah oo wadahadal la furaya maamulka Somaliland, waxaana uu madaxwayne shariif Somaliland ku ammaanay hormarka ay ka sameeyaan ammaanka iyo hormarka ay ka sameeyeen dhulkooda.
?Aqoonsiga Khaatumo ma?ahan qorshe aan ku burburinayno maamullada Puntland iyo Somaliland, ee ujeedadu waa in nabad iyo xasillooni aan ka dhex abuurno maamullada dalka ka jira? sidaasina waxaa yiri madaxwayne Shariif Shiikh Axmed.
Shariif Shiikh Axmed ayaa sheegay in aqoonsiga maamulka Khaatumo ay dawladda dhexe kala hadashay maamullada Puntland iyo Somaliland, waxaana uu hadalkiisa raaciyay in qorshaha dawladda dhexe uu yahay midaynta gobollada dalka, iyo soo dhawaynta cid-kasta oo diyaar u ah inay u hoggaansato nidaamka federaaliisimka ee dawladda dhexe u yaala.
Dhinca kale, Shiikh Shariif ayaa soo hadal-qaaday khilaafka baarlamaanka, waxaana uu hoosta ka xariiqay in marxalad adag waqti badan ay ku soo shaqeeyeen baarlamaanku, dawladduna ay u xusul-duubanayso xilligaan dadaal-kasta oo lagu xalin-karo mushkilada baarlamaanka Soomaaliya.
Madaxwaynaha DFKS Shariif Shiikh Axmed ayaa hadaladaan ka jeediyay shir-jaraa?id oo uu ku qabtay Moqdisho, waxaana uu gabagabadii hadalkiisa uu xusay in dawladda dhexe ay dhawaan maamulo ka hirgalin-doonto goobaha laga qabsaday kooxda Al-shabaab.
Maxamed A/llahi Ali ?Kooshin?